Wasiirka Gaashaandhiga Ingiriiska Oo Xilka Lagaga Qaaday Sir Uu Fashiliyay – somalilandtoday.com
Wasiirka Gaashaandhiga Ingiriiska Oo Xilka Lagaga Qaaday Sir Uu Fashiliyay
(SLT-London)-Gavin Williamson ayaa la eryay xilka wasiirka gaashaandhiga ee UK kadib baaritaan lagu ogaaday in uu bixiyay sir qaran oo la xidhiidhta shirks Golaha Amniga Qaranka.
Penny Mordaunt oo horey u ahayd wasiirka horumarinta caalamiga ah ayaa loo magacaabay wasiirka cusub ee gaashaandhiga. Waxay noqoneysaa haweeneydii ugu horreysay ee xilkaa qabata.
By Wariye May 14, 2021
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftigii uu hoggaaminayey oo gaadhay dalka Jabuuti, markii...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wefti uu hoggaaminayo, ayaa safar shaqo ugu ambo...
(SLT-Hargeysa)-Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta safar ugu baxaya dalka Jabbuuti. Madaxweyne biixi ayaa dalka...